हाइट विन्दु विश्वविद्यालय
ह्यार्थवर्थ चैपल मा हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटी (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटी ह्वाइट पोइन्ट, उत्तर क्यारोलिनामा स्थित एक निजी उदार कला विश्वविद्यालय हो। 1924 मा स्थापित, उच्च प्वाइंट युनिवर्सिटी युनाइटेड मेथोटिस्ट चर्चसँग सम्बन्धित छ। यो 4,500 विद्यार्थीहरु को घर हो जुन 15 देखि 1 छात्र-संकाय अनुपात द्वारा समर्थित छ। विश्वविद्यालयमा सात कलेजहरू छन्: कला र विज्ञान कलेज; फिलिप्स स्कूल बिजनेस; विल्सन स्कूल वाणिज्य; Qubein स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस; कला र डिजाइन स्कूल स्वास्थ्य विज्ञान र फार्मेसी स्कूल शिक्षा स्कूल। आधिकारिक स्कूल रंग बैजनी र सेतो हो।
हालको सातामा क्याम्पस ठूलो विस्तार र निर्माण भएको छ, र अधिकांश भवनहरु जर्जिया रिवाइभल स्टाइलमा बनाइन्छ।
उच्च प्वाइन्ट युनिवर्सिटीको बारेमा थप जान्न र कुन कुराले भर्ना लिन्छ, हाई प्वाइन्ट विश्वविद्यालय प्रोफाइल र जीपीए, उच्च बिन्दु प्रवेशका लागि एसएटी र एक्टिफ ग्राफ हेर्नुहोस् ।
हामी विश्वविद्यालयको मुख्य उपासना र ध्यान केन्द्रमा Hayworth चैपलसँग हाम्रो फोटो भ्रमण सुरु गर्छौं। चैपलले 275 जना मान्छेलाई सीट गर्न सक्छ। बालकनीले हप्ताको सेवामा भाग लिन ठूलो भीडलाई समायोजन गर्छन्।
हाईपोइन्ट विश्वविद्यालयमा फिच रिजर्भ हॉल
हाईपोइन्ट विश्वविद्यालयमा फिच रिजर्भ हॉल (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
1987 मा पूरा भयो, फिच हॉल 180 भन्दा बढी पुरुष, प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरू। कोठा डबल र एकल कब्जा को लागि व्यवस्थित छ। प्रत्येक कोठा मा हिड-इन बौछार संग बाथरूम छ। हरेक फ्लोरमा प्लाज्मा टेलिभिजन र फर्नीचर पढ्ने र आराम गर्नको लागि एक साधारण कोठा छ।
हाइट प्वाइन्ट युनिभर्सिटी मा Hayworth फाइन आर्ट्स सेन्टर
हाइट प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा हेर्थवर्थ फाइन आर्ट्स सेन्टर (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
हेर्थवर्थ फाइन आर्ट्स सेन्टर हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीको आर्ट्स एण्ड साइंस अफ कलेज, साथसाथै कलेजको मुख्य प्रदर्शन स्थलको घर हो। केन्द्रमा 500-सीट प्रदर्शन हॉल, संगीत प्रयोगशाला, कला स्टूडियो, र आर्ट गैलरी समावेश छ। अतिरिक्त रूपमा, कक्षाघर र संकाय कार्यालय Hayworth ठीक कला केन्द्र भित्र स्थित छ।
केस्टर अन्तर्राष्ट्रिय पदोन्नतिमा उच्च प्वाइन्ट
केस्टर अन्तर्राष्ट्रिय पदोन्नतिमा उच्च प्वाइन्ट (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
केस्टर अन्तर्राष्ट्रिय पदोन्नतिले विद्यार्थीहरुलाई परिसरमा एक शान्त क्षेत्र प्रदान गर्दछ। अग्रिम Hayworth ठीक कला केन्द्र बाट नर्टन हल सम्म फैलिएको छ। हप्ताको समयमा, घास र विद्यार्थी समूहहरूमा विद्यार्थी लाउन्जले अग्रताको साथ बूथहरूमा विज्ञापन गर्छ। यस क्याम्पस हरियो स्पेसको लम्बाइमा फव्वारे, बेंच र मूर्तिकला टैक्सी भेट्टाउन सकिन्छ।
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा म्याकईन हॉल
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा McEwen हॉल (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
1924 मा बनाइएको, म्याकवेन हॉल परिसरमा सबैभन्दा पुरानो आवास हॉल हो। इमारत 110 महिलाहरु, पहिलो तल्ला को तीन तल्ला मा विद्यार्थीहरु। McEwen Hall को सुइटहरुमा व्यवस्थित छ, दुई कोठा, डबल या सिंगल अधिवेशन संग, एक निकट बाथरूम द्वारा साझा गरिएको छ।
ह्याइट प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा मिलिस एथलेटिक सेन्टर
हाइइन्ट विश्वविद्यालयमा मिलिस एथलेटिक सेन्टर (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
मिलिस एथलेटिक सेन्टर को स्थापना 1 992मा बनाइयो र पुरुष र महिलाहरु को बास्केटबल र भ्यालीबल टीमहरुको घर हो। 1750-सीट केन्द्रले दुई "जम्बोटरून्स" को सुविधा दिन्छ जुन 2007 मा स्थापित भएको थियो। केन्द्र पनि एक स्विमिंग पूल र ताकतवर कंडीशनिंग क्षेत्र हो। विश्वविद्यालयले नयाँ 31,500 वर्ग फुट फीटमा हराएको छ। एटलेटिक प्रदर्शन केन्द्रका विद्यार्थी-एथलीटहरूको लागि ठाडो स्टेडियम।
हाई प्वाइन्ट प्यान्टर्समा 16 एथलेटिक टोलीहरू छन् जुन NCAA डिभीजन, बिग दक्षिण सम्मेलनमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। 2010-2011 सीजनको समयमा, पुरुष फुटबलले बिग दक्षिण नियमित सिजनमा जित्यो। विश्वविद्यालयको आधिकारिक रङ्ग बैजनी र सेतो हुन्।
हाई प्वाइन्ट विश्वविद्यालयमा नर्टन हल
हाई प्वाइन्ट युनिभर्सनमा नर्टन हॉल (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
नर्टन हल अन्तर्राष्ट्रिय स्कूल गृह सामान र गृह डिजाइनमा घर छ। डिजाइन स्टुडियो, एक डिस्प्ले ग्यालेरी, कम्प्यूटर-एड्स डिजाईन लेबुलहरू, र कपडाका कोठाहरू क्लासरूम र व्याख्यान हॉलहरू सँगसँगै नर्टन भित्र छन्। गृह सामान लाइब्रेरी पनि तीन-कथा भवनमा अवस्थित छ। यसमा एक विशाल विविधता सन्दर्भ पुस्तकहरू र व्यापारिक पत्रिकाहरू छन्।
हाई प्वाइन्ट युनिभर्सिटीमा फिलिप्स हॉल
हाइइन्ट विश्वविद्यालयमा फिलिप्स हॉल (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)।
फिलिप्स हॉल 27,000 वर्ग फुट छ। फिलिप्स स्कूल ऑफ बिजनेसमा घर निर्माण गर्दै। भवनले क्लासरूम, व्याख्यान हॉल, अध्ययन कक्ष, संकाय कार्यालय र एक सभागृहको सुविधा दिन्छ।
फिलिप्स स्कूल अफ बिजनेस 1,000 स्नातक विद्यार्थी छन्। मेजर प्रस्ताव मा लेखा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन र अन्तरराष्ट्रीय व्यापार समावेश छ। विद्यार्थीहरूले लेखा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र, उद्यमी, वित्त, ग्लोबल वाणिज्य, मार्केटिंग र स्पोर्ट्स मैनेजमेन्टमा साना व्यक्तिहरूको पछि लाग्न सक्छ। विद्यालयले एमबीए कार्यक्रम पनि प्रदान गर्दछ।
उच्चबिन्दुमा क्यूबिन स्कूल अफ कम्युनिकेशन
उच्चबिन्दुमा क्युबिन स्कूल अफ कम्युनिकेशन (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
सन् 2009मा पूरा भयो, निडो क्यूबिन स्कुल अफ कम्युनिकेशन्स कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमैंट र इवेंट मैनेजमेंट मा कम्युनिकेशन्स र कमर्स मा एक प्रमुख प्रदान गर्दछ। विद्यालयले दुई टिभी उत्पादन स्टूडियो, एक छात्र-दौड रेडियो स्टेशन, ल्याब सम्पादन गर्ने, साथसाथै एक अन्तरक्रियात्मक मिडिया र खेल डिजाईन केन्द्रको सुविधा दिन्छ। स्कूल हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटी, निडो क्यूबेन को वर्तमान अध्यक्ष को नाम मा राखयो।
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा स्लेन विद्यार्थी केन्द्र
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा स्लेन विद्यार्थी केन्द्र (फोटो विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
जॉन र मार्श स्लेन विद्यार्थी केन्द्र एक 90,000 वर्ग फुट छ जो छात्र गतिविधि केन्द्र परिसर को मध्य मा स्थित छ। केन्द्रमा 450-व्यक्ति कैफेटेरिया, क्याम्पस बुकस्टोर र साथमा एक मनोरञ्जन केन्द्र समावेश गर्दछ, जुन एक बास्केटबल कोर्ट, एरोबिक्स र भारोत्तोलन कक्ष र इन्डोर चलिरहेको ट्रयाक समावेश गर्दछ। दोस्रो तहमा खानाको खाना च्याट-फिल-ए, सबवे र स्टारबक्स प्रदान गर्दछ।
उच्च प्वाइन्ट मा स्लेन विद्यार्थी केन्द्र बाहिर
बाहिर स्लेन, विद्यार्थीहरु भोजन को छत, मार्नर स्विमिंग पूल, र एक 18 व्यक्ति जकूजी को उपयोग गर्दछ।
हाई प्वाइन्ट विश्वविद्यालयमा स्मिथ लाइब्रेरी
हाई प्वाइन्ट विश्वविद्यालयमा स्मिथ लाइब्रेरी (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
रबर्ट्स हॉलको आसपासको स्मिथ लाइब्रेरीले 30,000 भन्दा बढी घरहरू र 50,000 पत्रिकाहरू उच्च प्वाइन्ट विद्यार्थीहरूमा उपलब्ध छ। यो परिसरमा केन्द्रीय स्नातक पुस्तकालय हो। पुस्तकालय अकादमिक सेवा केन्द्र र लर्निंग उत्कृष्टता कार्यक्रमको लागि घर हो, जुन व्यक्तिगत रूपमा विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ।
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा व्रेनन मेमोरियल हॉल
हाइइन्ट मेमोरियल हॉलमा हाइ प्वाइन्ट युनिवर्सिटी (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
Wrenn Hall कार्यालय को स्नातक प्रवेश कार्यालय। 62% को एक स्वीकृति दर संग, हाई प्वाइन्ट विश्वविद्यालय को 4,500 को छात्र जनसंख्या छ। विद्यालयमा 15: 1 को छात्र-संकाय अनुपात छ।
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटी स्कूल अफ कमर्स
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटी अफ अफ कमर्स (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
प्लेटो एस विल्सन स्कूल अफ कमर्सले बिजनेस स्कूल र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय गृह सामान र इन्टरनेट डिजाईनको बीचमा कार्यक्रमहरू एक अद्वितीय अनुशासन बनाउनको लागि संयोजन गर्दछ। वास्तवमा, यो अमेरिकामा यसको दयालु कार्यक्रम हो। 60,000 वर्ग फुट फीचर लाइभ वित्तीय डेटाबेस, एक मेक प्रयोगशाला, र सानो व्यवसाय र उद्यमशीलताको लागि केन्द्र संग एक स्टक व्यापारिक कोठा को सुविधा दिन्छ।
हाई प्वाइन्ट विश्वविद्यालयमा रोबर्ट हॉल
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा रोबर्ट्स हॉल (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
रबर्ट्स हॉल 1924 मा स्थापित हुँदा उच्च प्वाइन्ट विश्वविद्यालयमा स्थापित पहिलो इमारत थियो। आज, यो स्कूलको प्रशासनिक कार्यालयहरूको बहुमत हो। घडी टावर एक क्याम्पस ल्यान्डमार्कको रूपमा देखा पर्दछ किनभने यो परिसरमा धेरै फरक ठाउँहरूबाट देखिन्छन्। शुरुवात हरेक वर्ष रोबर्ट हॉल लानमा हुन्छ।
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटी सेन्टर (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
77,000 वर्ग फुट फुट विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय मा 500 देखि अधिक विद्यार्थीहरु, एक भोजन कक्ष, 200 सीट चलचित्र थियेटर, पुस्तकालय र आर्केड को लागि एक निवास हॉल पनि शामिल छ। भवनको माथि, 1924 प्रिमियर, विश्वविद्यालयको स्टेकहाउस केवल आरक्षण द्वारा विद्यार्थीहरूलाई तीन-पाठ्यक्रम भोजन कार्य गर्दछ।
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा नर्कोस ग्रेजुएट स्कूल
हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटीमा नर्कोस ग्रेजुएट स्कूल (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
नर्कोस ग्रेजुएट स्कूलले शिक्षा, इतिहास, व्यवसाय प्रशासन, गैर-नाफा व्यवस्थापन, र सामरिक संचारमा स्नातक कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ। भवन धेरै विश्वविद्यालय विभागहरु र सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय को घर पनि छ।
कङ्गन हॉलमा ह्याइट प्वाइन्ट युनिवर्सिटी
कङ्गन हॉलमा ह्याइट प्वाइन्ट युनिवर्सिटी (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
कङ्गन हॉल परिसर मा मुख्य विज्ञान भवन हो र जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, र कम्प्यूटर साइंस को घर हो। भवनले कक्षाहरू र प्रयोगशालाहरू सुविधा दिन्छ।
एटलास स्कुप्लेचर मा हाई प्वाइन्ट युनिवर्सिटी
एटल बिन्दु विश्वविद्यालयमा एटलास मूर्तिकला (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
Wrenn Hall, Office of Undergraduate Admissions, Out of Atlas Kneeling of Aldrich Sculpture, outside campus on the most prominent sculptures। मूर्तिकला हाइलाइट प्वाइन्ट युनिवर्सिटीको आदर्श वाक्य को लागी छ: ईश्वरीय दिशानिर्देशको बिना।
हाई प्वाइन्ट युनिभर्सिटीमा ड्रीम बिग चेयरहरू
हाई प्वाइन्ट युनिभर्सिटीमा ड्रीम बिग चेयरहरू (विस्तार गर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्)। फोटो क्रडिट: एलन ग्रोव
"ड्रीम बिग कुर्सियों" को रूपमा जानिएको छ "यी दुई ठूला ठूला चट्टान कुर्सियों एक शरद ऋतु से प्रेरित थे जो 2009में स्कूल के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखते हुए दावा करते हुए हाई प्वाइंट विश्वविद्यालय ने उन्हें" बड़ा सपना देखा "।
हाइट विन्दु प्रोफाइल
उच्च प्वाइन्ट एडमिशनको लागि GPA, SAT र ACT ग्राफ
Babson College Campus को फोटो टूर लिनुहोस्
बिग दस विश्वविद्यालयहरूको तुलना
SUNY पोट्सडमको फोटो टूर
द पेरिसकोप इतिहास
वार्म अप गियरका लागि बैलेट
प्रकाश र ध्वनि क्यू सूची
राष्ट्रपति को अमेरिका सीनेट को प्रो टेम्पोर को छ?
जुलियस सीजरको बारेमा लेखहरूको संग्रह
RAMIREZ उपनाम अर्थ र उत्पत्ति
सिफारिस गरिएको भिडियो गेम मूल स्कोरहरू र Soundtracks
वर्गीकरण विशेषण: एक परिचय
अंग्रेजी शिक्षाका लागि भविष्य फारमहरू
तपाईंको उच्चारण कसरी सुधार गर्ने?
चढाई अकसर गरे प्रश्न: के म मेरो सडक जूता भन्दा सानो चट्टानहरू किन्न चाहन्छु?
Il Trovatore को सारांश
के मोबी डिक एक वास्तविक व्हेल थियो?
स्त्रीवादी यूटोपिया / डस्टोपिया
युरोपेली संघ: एक इतिहास र अवलोकन
शीर्ष 10 Nas एल्बम
साइबरस्टॉकिंग र इन्टरनेट दुर्व्यवहार - त्यसपछि र अब
ट्राइफाम टाइगर90
क्रिसमसको व्हाइट हाउसमा 19औं शताब्दीमा
Qué son delitos de conducta inmoral y sus consuuencias migratorias